2 Madzimambo 8 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
2 Madzimambo 8:1-29
8 Zvino Erisha akanga ataura nomukadzi aiva nomwanakomana waakanga amutsa,+ achiti: “Simuka uende, iwe neimba yako, unogara uri mutorwa chero kupi kwaungagara;+ nokuti Jehovha arayira kuti pave nenzara,+ uyewo, iyo ichauya panyika kwemakore manomwe.”+ 2 Naizvozvo mukadzi wacho akasimuka, akaita maererano neshoko romunhu waMwari wechokwadi, akaenda,+ iye neimba yake,+ akanogara ari mutorwa munyika yevaFiristiya+ kwemakore manomwe. 3 Zvino pakapera makore manomwe, mukadzi wacho akadzoka achibva kunyika yevaFiristiya, akaenda kunochemera imba yake nomunda wake kuna mambo.+ 4 Zvino mambo akanga achitaura naGehazi+ mushandi womunhu waMwari wechokwadi, achiti: “Ndapota, ndirondedzerere zvinhu zvikuru zvose zvakaitwa naErisha.”+ 5 Zvino zvaakanga achirondedzera kuna mambo kumutsa kwaakanga aita munhu akafa,+ mukadzi aiva nomwanakomana waakanga amutsa akanga achichemera imba yake nomunda wake+ kuna mambo. Gehazi akabva ati: “Ishe wangu+ mambo, uyu ndiye mukadzi wacho, uye uyu ndiye mwanakomana wake akamutswa naErisha.” 6 Mambo akabva abvunza mukadzi wacho, iye akarondedzera kwaari nyaya yacho.+ Mambo akabva amupa rimwe jinda,+ achiti: “Dzorera zvinhu zvake zvose nezvibereko zvose zvomunda, kubvira pazuva raakabva munyika kusvikira iko zvino.”+ 7 Zvino Erisha akasvika kuDhamasiko;+ uye Bheni-hadhadhi+ mambo weSiriya akanga achirwara. Naizvozvo iye akaudzwa kuti: “Munhu waMwari+ wechokwadi asvika kuno.” 8 Mambo akati kuna Hazaeri:+ “Enda nechipo+ chiri muruoko rwako, unosangana nomunhu waMwari wechokwadi, ubvunze+ Jehovha uchishandisa iye, uchiti: ‘Ndichapora here pakurwara uku?’” 9 Naizvozvo Hazaeri akaenda kunosangana naye, akaenda aine chipo muruoko rwake, zvinhu zvakanaka zveDhamasiko zvemarudzi ose, mutoro wengamera makumi mana, akasvika, akamira pamberi pake akati: “Mwanakomana+ wenyu Bheni-hadhadhi, mambo weSiriya, andituma kwamuri, achiti: ‘Ndichapora here pakurwara uku?’” 10 Erisha akabva ati kwaari: “Enda unoti kwaari, ‘Chokwadi uchapora,’ asi Jehovha andiratidza+ kuti chokwadi achafa.”+ 11 Akaramba akamutarira, akaramba akadaro kusvikira ava kunyara. Munhu waMwari wechokwadi akabva atanga kusvimha misodzi.+ 12 Hazaeri akati: “Ishe wangu ari kuchemei?” Iye akati: “Nokuti ndinonyatsoziva zvinokuvadza+ zvauchaitira vanakomana vaIsraeri. Uchapisa maguta avo akavakirirwa, uchauraya nebakatwa varume vavo vakasarudzwa, uchaputsa-putsa vana vavo,+ uye uchatumbura vakadzi vavo vane pamuviri.”+ 13 Hazaeri akabva ati: “Mushandi wenyu chiiko, imbwawo+ zvayo, zvokuti angaita chinhu chikuru chakadaro?” Asi Erisha akati: “Jehovha andiratidza kuti iwe uchava mambo weSiriya.”+ 14 Pashure paizvozvo akabva kuna Erisha, akasvika kunashe wake, uyo akabva ati kwaari: “Erisha ati chii kwauri?” Iye akati: “Ati kwandiri, ‘Chokwadi muchapora.’”+ 15 Zvino pazuva rakatevera iye akatora jira rokufukidzisa, akarinyika mumvura, akaritambanudzira pachiso chake,+ zvokuti iye akafa.+ Hazaeri+ akatanga kutonga panzvimbo pake. 16 Zvino mugore rechishanu raJehoramu+ mwanakomana waAhabhi mambo waIsraeri, Jehoshafati paaiva mambo waJudha, Jehoramu+ mwanakomana waJehoshafati mambo waJudha akava mambo. 17 Akanga aine makore makumi matatu nemaviri paakava mambo, uye akatonga kwemakore masere ari muJerusarema.+ 18 Akafamba nenzira yemadzimambo aIsraeri,+ sezvakanga zvaitwa nevaya veimba yaAhabhi;+ nokuti mwanasikana waAhabhi ndiye akava mudzimai wake,+ uye akaramba achiita zvakaipa pamberi paJehovha. 19 Asi Jehovha haana kuda kuparadza Judha+ nokuda kwomushumiri wake Dhavhidhi,+ sezvaakanga amupikira kuti aizopa iye nevanakomana vake rambi+ nguva dzose. 20 Mumazuva ake Edhomu+ yakamukira Judha, vakabva vagadza mambo+ kuti avatonge. 21 Naizvozvo Jehoramu akaenda kuZairi, uyewo aiva nengoro dzose. Zvino iye akamuka usiku, akarwisa vaEdhomu vakanga vakamupoteredza nevakuru vengoro; uye vanhu vakatizira kumatende avo. 22 Asi Edhomu yakaramba ichimukira Judha kusvikira nhasi. Ribna+ yakabva yatanga kumukirawo panguva iyoyo. 23 Mamwe mabasa ose aJehoramu nezvose zvaakaita, hazvina kunyorwa here mubhuku+ remabasa emazuva emadzimambo aJudha? 24 Jehoramu akazorara nemadzitateguru ake,+ akavigwa pamwe nemadzitateguru ake muGuta raDhavhidhi.+ Mwanakomana wake Ahaziya+ akatanga kutonga panzvimbo pake. 25 Mugore rechigumi nemaviri raJehoramu mwanakomana waAhabhi mambo waIsraeri, Ahaziya mwanakomana waJehoramu mambo waJudha akava mambo.+ 26 Ahaziya akanga aine makore makumi maviri nemaviri paakatanga kutonga, uye akatonga kwegore rimwe chete ari muJerusarema.+ Amai vake vainzi Atariya+ muzukuru waOmri+ mambo waIsraeri. 27 Iye akafamba nenzira yeimba yaAhabhi,+ akaramba achiita zvakaipa pamberi paJehovha,+ sezvaiita imba yaAhabhi, nokuti aiva hama yeimba yaAhabhi zvaakanga akaroora ikoko.+ 28 Naizvozvo akaenda naJehoramu mwanakomana waAhabhi kunorwa naHazaeri+ mambo weSiriya kuRamoti-giriyedhi,+ asi vaSiriya vakakuvadza+ Jehoramu. 29 Naizvozvo mambo Jehoramu+ akadzoka kuJezreeri+ kuti arapwe maronda aakakuvadzwa nevaSiriya kuRama paakarwa naHazaeri mambo weSiriya. Ahaziya+ mwanakomana waJehoramu mambo waJudha akaenda kuti anoona Jehoramu mwanakomana waAhabhi kuJezreeri, nokuti akanga achirwara.